Ogwe aka ngọngọ ngọngọ - China Hand chain block manufacturers, suppliers
Ihe mgbochi HS-VD
• Njirimara 1. Ịnabata teknụzụ ndị Japan na mkpuchi ya na-ewere teknụzụ nwere ọmarịcha ihe dị elu 2. Ịkwado efere alloy dị ala iji mee ka agbụ agbụ ahụ dịkwuo nchebe, nwee ntụkwasị obi ma na-adịgide. 3. klaasị 80 ikike dị elu na -ebuli elu, ihe nchekwa dị elu, ndụ ogologo ndụ 4. Ntugharị dị nro, arụmọrụ dị elu, obere aka ise 5. pawl ugboro abụọ, nhazi wiilị abụọ, ngwaahịa dị nchebe na ntụkwasị obi ejirila ọtụtụ ebe na ike nuklia, nnyefe ọkụ na mgbanwe
Ihe mgbochi HS-VT
• Jiri ngọngọ usoro HSZ-VT bụ otu ụdị ngwa ọrụ na-ebuli akwụkwọ ntuziaka dị mfe iji ma dịkwa mfe iburu. Ọ dị mma maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ebe a na -egwupụta ihe, ebe a na -ewu ihe, mmepụta ihe ubi dị ka ụgbọ mmiri, n'ọdụ ụgbọ mmiri, n'ụlọ nkwakọba ihe, wdg. Enwere ike iji ngọngọ HSZ-VT n'ụdị ụdị egwu egwu ọ bụla, dabara maka njem otu egwu, otu osisi ntuziaka, ụdị akwa akwa na akwa cantilever. • Njirimara 1.Safe, a pụrụ ịdabere na ya 2.High perfo ...
Ihe mgbochi HST
Ihe njiri mara nke HST bụ njiri kọmpat, ịdị arọ, ịdịte aka, arụmọrụ dị elu na obere aka. Obere oghere dị n'etiti nko abụọ, ọkachasị dabara maka oghere ọrụ dị warara, nchekwa na ntụkwasị obi, mmezi dị mfe. Ihe mkpuchi na gia nwere ezigbo nkwụsi ike, ike dị elu, ikike mgbochi ọgụ, ma nwee ike ichebe ihe dị n'ime ahụ yana uru ndị ọzọ, nke nwere njikọ chiri anya na ihe eji eme ya alloy steel, usoro mmepụta dị elu ...
Atụmatụ: 1. Ọ nwere ọrụ nke ịhazigharị ọnọdụ nke nko ala dị ala; 2, sistemụ breeki abụọ na -akpaghị aka, nchekwa dị elu; 3, okpukpu abụọ na -ahazi usoro wiil, na -ebuli ngwongwo nke ọma, ọ dịghị mfe na yinye kaadị; nko nwere ike dị elu ma na -eyi nguzogide; 5. G80 alloy steel lifting chain na galvanized hand chain bụ ọkọlọtọ nhazi.
Mgbanwe nke ọnụahịa HSC
A na -emezi usoro HSC Chain Hoist site na ntọala nke ụdị HSZ, mgbe ọ mụsịrị teknụzụ dị elu nke ụwa. Ewezuga njirimara ọdịnala nke eriri igwe HSZ, ọ chọrọ obere ike ịdọrọ aka, ọ dịkwa nchebe, mara mma ma dabara adaba. Nkọwapụta HSZ-C0.5 HSZ-C1 HSZ-C1.5 HSZ-C2 HSZ-C3 HSZ-C5 HSZ-C10 Ike (t) 0.5 1 1.5 2 3 5 10 Standard Lift (m) 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 Ibu Ibu Ule na -agba ọsọ (T) 0.75 1.5 2.25 3 4.5 7.5 12.5 Headroom (clo clo ...
Ihe mgbochi HSZ
HSZ handist bụ ụdị dị mfe iji, ejiri ya ebe niile, dabara adaba iburu igwe na -ebuli akwụkwọ ntuziaka, enwere ike iji ya na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ogbunigwe, ọrụ ugbo, ọkụ eletrik, mmepụta ihe na ihe owuwu, ụgbọ mmiri, ụgbọ mmiri, ụgbọ mmiri, nrụnye igwe nkwakọba ihe, ibuli ibu, ụgbọ. na -ebutu ma na -ebutu, ọkacha mma maka ikuku ikuku na enweghị ọrụ ike. A na -emepụta ngwaahịa nke ụlọ ọrụ anyị dị ka ọkọlọtọ mba si dị, jiri nhazi symmetrical nke usoro nhazi ngwa nke abụọ, ...
Micro Electric eriri eriri, Igwe ọkụ eletrik eletrik, Jet 1.5 Ton Chain ndoli, Ntuziaka Lever Chain ndoli, Lever Puller, Bannon Electric Hoist,